Ikhishwe kumagciwane weSoy (Glycine max.) Amakhambi wonyaka ohlobo lwe-leguminosae, ngophuzi olungajulile okucishwe impuphu emhlophe, iphunga elikhethekile nokunambitheka okulula. Izithako ezisebenzayo ngama-soy isoflavones, ama-Soy isoflavones uhlobo lwama-flavonoids, okuluhlobo lwama-metabolites wesibili akhiwa ekukhuleni kosoya. Ama-isoflavones ama-Soy abizwa nangokuthi ama-phytoestrogens ngoba akhishwe ezitshalweni futhi anesakhiwo esifanayo ne-estrogen.Soy isoflavones yizinto zemvelo zokuvikela umdlavuza, ezithinta uketshezi kwamahomoni, umsebenzi we-metabolic biological, amaprotheni synthesis nomsebenzi wokukhula.
Ikhishwe empandeni eyomile ye-polygonum cuspidatum sieb.et.zucc, enombala ophuzi onsundu kuye ocoleni omhlophe, iphunga elikhethekile nokunambitheka okulula. Izithako ezisebenzayo yi-resveratrol, luhlobo lwe-non flavonoid polyphenol organic compound, eyi-antitoxin ekhiqizwa izitshalo eziningi lapho ivuselelwa. I-resveratrol yemvelo ine-CIS nezakhiwo ze-trans. Ngokwemvelo, ikhona kakhulu ekuguqulweni kwenguquko. Lezi zakhiwo zombili zingahlangana noshukela ukwakha i-CIS kanye ne-trans resveratrol glycosides. I-CIS kanye ne-trans resveratrol glycosides ingakhipha i-resveratrol ngaphansi kwesenzo se-glucosidase emathunjini. I-Trans resveratrol ingaguqulelwa kwisomisi se-CIS ngaphansi kwemisebe ye-UV.
Ikhishwe emgqonyeni omisiwe we-rutaceae we-phellodendron amurense, onomphuzi ophuzi, iphunga elikhethekile nokunambitheka okumunyu, izithako ezisebenzayo yi-berberine hydrochloride, iyi-quaternary ammonium alkaloid ehlukaniswe neRhizoma Coptidis futhi Iyinto esemqoka esebenzayo yeRhizoma Coptidis. Ijwayele ukusetshenziswa ekwelapheni uhudo lwe-bacillary, i-gastroenteritis ebukhali, i-cholecystitis engapheli, i-conjunctivitis, i-suppurative otitis media nezinye izifo, ezinomphumela obalulekile wokwelapha. IBerberine hydrochloride iyi-isoquinoline alkaloid, etholakala ezitshalweni eziningi zemindeni eyi-4 nohlobo lwe-10
Ikhishwe ku-Andrographis paniculata (Burm.f.) Ness, onomphuzi ocolekileyo ophuzi nokumhlophe, iphunga elikhethekile nokunambitheka okumunyu. Izithako ezisebenzayo yi-andrographolide, i-Andrographolide iyinto ephilayo, ingxenye esemqoka esebenzayo yesitshalo semvelo i-Andrographis paniculata. Inomphumela wokususa ukushisa, ukukhipha ubuthi emzimbeni, i-anti-inflammatory ne-analgesic. Inomphumela okhethekile wokwelapha ekuthelelekeni komgudu wokuphefumula wegciwane kanye negciwane kanye ne-dysentery. Kuyaziwa njengesidakamizwa semvelo semithi elwa namagciwane.
Ikhishwe kumagxolo omisiwe eCinnamomum cassia Presl, anempuphu ebomvu ebomvu, iphunga elikhethekile, ukunambitheka okubabayo nokunoshukela, izithako ezisebenzayo yiCinnamon polyphenols, iCinnamon polyphenol iyi-polyphenol yesitshalo, engakhuthaza ukuhlanganiswa kwe-collagen emzimbeni womuntu ngemuva kokuba umunce umzimba womuntu, futhi ungasusa ama-radicals amahhala omzimba. Kungasheshisa ukuvuselelwa kwamangqamuzana esikhumba, kwandise ukusebenza kwamaseli esikhumba, futhi kubambezele ukuguga kwesikhumba.
Ikhishwe empandeni eyomile ye-Eurycoma longifolia Jack, i-brown yellow powder, iphunga ukunambitheka okukhethekile nokubabayo, izithako ezisebenzayo yi-eurycomanone, i-eurycomanone inomphumela wokumisa umalaleveva, ukususa ubumanzi ne-jaundice, ukuqinisa i-yang, ukwenza ngcono amandla omzimba nobungqabavu, ukunciphisa ukukhathala, inzalo, isilonda sokulwa ne-antipyretic. Futhi kunomphumela wokuthuthukisa izifo ezahlukahlukene ezinjenge-hypertension nesifo sikashukela.
Ikhishwa eziqwini ezomisiwe ze-sophora japonica (Sophora japonica L.), isitshalo semidumba. Izingxenye zamakhemikhali yi-rutin, i-quercetin, i-genistein, i-genistin, i-kaemonol njalonjalo ngomphuzi ophuzi okhanyayo nophuzi oluhlaza okotshani. Eminyakeni yamuva nje, abasebenzi bezokwelapha ekhaya nakwamanye amazwe bafundile ngemiphumela yayo, futhi bathola ukuthi izithako zayo ezisebenzayo zinemisebenzi elwa namagciwane, elwa namagciwane, elwa nokuvuvukala neye-anti-oxidation, futhi inomphumela omuhle wokuvimbela nokwelapha ekwehliseni i-lipid yegazi, ukuthambisa igazi imikhumbi, izinso ezilwa nokuvuvukala nezithambisa umzimba.
Ukukhishwa kwe-Epimedium kususelwa ezitshalweni zeBerberidaceae, ezikhishwa emaqabungeni omisiwe e-Epimedium (ngesiLatin: Epimedium Brevicornum Maxim). Ungu-powder ophuzi onsundu onephunga elikhethekile futhi unenani eliphakeme lokwelapha. Ukukhishwa kwe-Epimedium ikakhulu kuqukethe i-Icariin futhi sekuyisikhathi eside isetshenziswa njengesitshalo semvelo esihlanzekile se-aphrodisiac. I-Icariin inezinhlobonhlobo zemisebenzi yomzimba kanye nemiphumela eminingi emisha yokwenziwa kwemithi kanye nezicelo ezitholakele.Ingagcini ngokwandisa ukugeleza kwegazi kwemithambo yenhliziyo nemithambo yegazi, ikhuthaze ukusebenza kwe-hematopoietic, kepha futhi inomphumela wokwandisa izinso nokungabi namandla, i-anti- isimila njalonjalo. Iyancibilika emanzini, i-ethanol ne-ethyl acetate, kepha ayincibiliki ku-ether, benzene ne-chloroform.
I-Oleuropein itholakala kakhulu emaqabungeni omnqumo (i-Olea Europaea L.). Inganekwane ithi u-Athena, unkulunkulukazi wokuhlakanipha, wehlula uPoseidon ngokuphonsa umkhonto wakhe edwaleni, wakha umuthi womnqumo othelayo. Isihlahla somnqumo siwuphawu lokuthula, ubungani, ukuzala nokukhanya, okwaziwa ngokuthi "umuthi wokuphila". Kunezinhlanganisela eziyisihlanu eziyinhloko zama-phenolic emaqabunga omnqumo: i-oleuropein, i-flavonoids, i-flavones, i-flavanols kanye ne-phenolic substitute. I-Oleuropein, i-bioactive kakhulu yalezi zinhlanganisela, iyisakhi esiyinhloko se-polyphenolic secoiridoid emaqabungeni omnqumo. Yimpuphu ephuzi nsundu futhi isetshenziswa kabanzi emikhiqizweni yezempilo nakwezimonyo.
Ikhishwa ezimbewini ezomile zomuthi wefilakisi (iLinum usitatissimum L.) womndeni wakwaLinaceae. Isithako esisebenzayo yiSecoisolariciresinol Diglucoside (SDG) ngophawuda ophuzi onsundu. I-SDG ithathwa njenge-phytoestrogens, efana kakhulu ne-estrogens yomuntu. Itholakala ikakhulu embewini yefilakisi, futhi okuqukethwe kwayo kuncike enhlobonhlobo yefilakisi, isimo sezulu kanye nezimo zemvelo.Kunomphumela wokuvikela ezifweni ezincike ku-estrogen ezifana nomdlavuza webele, umdlavuza wendlala yesinye, isifo sokuya esikhathini kanye ne-osteoporosis. I-SDG ekhishwe ngokwemvelo ayikwazi ukusetshenziswa kuphela njengezithasiselo ekudleni okusebenzayo, kepha futhi ingezwa kwizimonyo ukuvikela nokwelapha ukuguga kwesikhumba ngezakhiwo zazo zokulwa ne-antioxidant.
I-Baicalin iyinhlanganisela eyedwa ekhishwe ikakhulu empandeni ye-skullcap (Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae)). I-Baicalin powder iluhlaza okotshani ngephunga elincane nokunambitheka okumunyu. Inomsebenzi obalulekile we-biological, antibacterial, diuretic, anti-inflammatory neminye imiphumela, futhi inempendulo enamandla yokulwa nomdlavuza ekusebenzeni komzimba. Iphinde ibambe iqhaza elibalulekile kwezokwelapha. Ukumuncwa nge-ultraviolet kwe-baicalin kungasusa ama-radicals mahhala futhi kuvimbele ukwakheka kwe-melanin. Ngakho-ke, ayikwazi ukusetshenziswa kuphela kwezokwelapha, kodwa futhi nakwezimonyo, okuyinto enhle yokusebenza kwezimonyo eziluhlaza.